Thunderbird 78.5.1: Vaovao sy zavatra hafa, an'ny kinova farany navoaka | Avy amin'ny Linux
Thunderbird 78.5.1: Vaovao sy zavatra hafa, an'ny kinova farany navoaka
Vao andro vitsy lasa izay dia niresaka an'izany isika fitaovana rindrambaiko fampiasa indrindra a Mpampiasa Office, dia ireo fampiharana ny karazana: Web browser, Office Suite, File Explorer, ankoatry ny: Viewer / Editors / Mpilalao feo, sary ary horonan-tsary. Ary mazava ho azy, ny fampiharana kely ampiasaina dia ny Mpanjifa Desktop ho an'ny Fitantanana kaonty mailaka,
Amin'ity sokajy farany voalaza ity dia mazava ho azy fa tsy tokony tsy hahita aloha ianao Thunderbird, izay efa ary no vahaolana nentim-paharazana, amin'ity faritra ity ho an'ny ankamaroan'ny Linuxeros. Ary ity volana ity an'ny Desambra 2020 dia nohavaozina amin'ny kinova Thunderbird 78.5.1.
Koa satria miresaka momba izany izahay Thunderbird ary ny fanavaozana azy, amin'ity famoahana ankehitriny ity dia hifantoka amin'ny vaovaon'ity isika kinova vaovao desambra 2020, izany hoe, ny 78.5.1. Na izany aza, ho an'ireo izay te hiditra lalindalina kokoa, rehefa avy namaky ity boky ity, dia tsidiho ny bokintsika teo aloha mifandraika amin'izany Thunderbird, toy ny:
Inona no vaovao ao amin'ny Mozilla Thunderbird 78.3.1
0.1 Thunderbird 78.5.1: Misy fanavaozana vaovao amin'ny Desambra 2020
0.2 Inona ny Thunderbird?
0.3 Inona no vaovao ao amin'ny Thunderbird 78.5.1
0.4 Safidy maimaim-poana fantatra
Thunderbird 78.5.1: Misy fanavaozana vaovao amin'ny Desambra 2020
Inona ny Thunderbird?
Amin'izao fotoana izao, Thunderbird dia navoaka vetivety tao aminy tranokala ofisialy toy izao manaraka izao:
"Thunderbird dia rindrambaiko mailaka maimaimpoana izay mora apetraka sy ampanjifaina, ary feno endri-javatra mahafinaritra!"
Na izany aza, nofariparitan'izy ireo amin'ny antsipiriany toy izao manaraka izao:
"Thunderbird dia mailaka loharanom-baovao maimaim-poana sy misokatra, vaovao, chat ary kalandrie kalandrie izay mora amboarina sy ampanjifaina. Ny iray amin'ireo fitsipika fototra ao amin'ny Thunderbird dia ny fampiasana sy fampiroboroboana ny fenitra misokatra - ity fomba fiasa ity dia fandavana ny tontolontsika amin'ireo sehatra mihidy sy serivisy mihidy izay tsy afaka mifampiresaka. Tianay ny mpampiasa anay hanana fahalalahana sy safidy momba ny fomba fifandraisan'izy ireo."
Inona no vaovao ao amin'ny Thunderbird 78.5.1
Momba ny Rafitra miasa, ireto no takiana farafaharatsiny farafaharatsiny:
Windows: Windows 7 na avo kokoa.
Mac: macOS 10.9 na avo kokoa.
Linux: GTK + 3.14 na avo kokoa.
Raha ny momba ny fiasa na ny fiasa fanampiny dia misy ireto:
OpenPGP: Safidy nampidirina mba hanajanonana ny fanaovan-lohahevitra mailaka.
Momba ny fiasa na toetra nihatsara / novaina dia misy ireto manaraka ireto:
OpenPGP: OpenPGP import key key izao dia manohana ny fisafidianana rakitra marobe sy ny fanekena ny fanalahidy nafarana.
MailExtensions: Ankehitriny ny fiasa "getComposeDetails" dia hiandry ny hetsika "compose-editor-ready".
Raha ny momba ny fanamboarana bibikely dia ireto no sasany aminy:
Ny esera mailaka vaovao dia tsy nesorina tao amin'ny systray rehefa nakatona.
Tsy nanaja ny safidy "Run search on server" i Thunderbird rehefa mikaroka hafatra.
Ny loko misongadina ho an'ny lahatahiry misy hafatra mbola tsy voavaky dia tsy tazana amin'ny lohahevitra maizina.
OpenPGP: Tsy hita ny lakile avy amin'ny manager key.
OpenPGP: Ny safidy hanafarana lakile avy amin'ny clipboard dia tsy mandeha foana.
Boky adiresy: ny fanaovana pirinty ireo mpikambana ao amin'ny lisitra fandefasana mailaka dia niteraka vokatra tsy marina.
Tsy afaka mifandray amin'ireo mpizara LDAP voarindra miaraka amin'ny mari-pankasitrahana SSL vita sonia.
Tsy mandeha araka ny nampoizina ny fanamafisam-peo tamin'ny alàlan'ny LDAP.
Kalandrie: ny fanindriana Ctrl-Enter ao anaty fifanakalozan-kevitra momba ny hetsika vaovao dia hamorona fisehoan-javatra mitovy.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny zava-baovao amin'ity fanavaozana ity, na ny taloha na ny ho avy, kitiho fotsiny ity manaraka ity rohy. Ary ho an'ny fampahalalana fanampiny mifandraika amin'ireo rohy 2 hafa: Endri-javatra Thunderbird y Mozilla Wiki.
Safidy maimaim-poana fantatra
Mety misy hafa maro hafa, sady maimaim-poana no misokatra ary maimaim-poana sy mihidy ihany, na tsy miankina na ara-barotra, ary izany dia natao ihany Linux como el Multiplatform. Na izany aza, amin'ny lahatsoratra ho avy dia horesahintsika BlueMail Post Manager, izay a cross-platform tsara sy safidy maimaim-poana, raha sanatria ka tsy misy manome fahafaham-po ny filantsika ara-teknika na miankina manokana.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Thunderbird 78.5.1», izany hoe, ny fanavaozana farany navoaka ho an'ity volana desambra ity, momba ny mpanjifa Desktop efa fanta-daza amin'ny fitantanana imailaka, ao amin'ny GNU / Linux Distributions; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Thunderbird 78.5.1: Vaovao sy zavatra hafa, an'ny kinova farany navoaka
Salama, mijanona miaraka amin'i Sylpheed aho, maivana ary mitantana tsara ny mailaka tsy misy olana
Miarahaba anao, Octavio. Misaotra tamin'ny hevitrao. Safidy hafa maimaimpoana, minimalista, maivana ary miasa io.
BlueMail: safidy maimaim-poana, fa tsy maimaimpoana na malalaka ho an'ny Thunderbird
Ny fahalemena amin'ny loharano misokatra indraindray dia tsy voamariky ny 4 taona mahery